Aha omenala omenala na onye na - ebubata ngwaahịa | Asusu
Na-akwado imepụta ma na-emepụta ihe na-edepụta ya kemgbe 1998
Mpempe akwụkwọ mara mma
Igwe anaghị agba nchara Label
Zinc Alloy Aha Aha
Akwụkwọ osisi omenala
Ihe omuma ndi ahia
Ajọ baajị / ngwaahịa gị Brandssador
Ihe ngosi Alice nwere ụdị akara ngosi na-eji igwe anaghị agba nchara, titanium, ọla kọpa na aluminom na ndị ọzọ. Ekpuchi etching, ihe mgbochi nke ihe mgbochi, oxidizing, porishing, roba na usoro atg.
Gbado anya na arịa ụlọ na ngwa eletrik.
Qualitylọ Ọrụ Label Aluminium Kacha Mma Dị Mma
Ọkachamara akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ ahụ, nkọwa banyere akara akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ anọ.Afọ iri abụọ na asaa nke emepụta ihe ngosi sign, site na ihe eji eme ihe iji kpụọ mmepe ngwaahịa, na-ewebata usoro ọrụ na isi, na-achịkwa sistemụ nrụpụta dum, ma na-agbalị imepụta kacha mma zuru oke.
Kachasị mma Cd Lines aluminom Alinimus na-eweta - ụlọ ọrụ Alice
Na-achọ ihe na-eweta aluminom gbara gburugburu? Nkọwa gbasara baajị aluminom.Anyị (Alice) bụ ndị ọkachamara afọ iri abụọ na asaa. Anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100, ihe ndetu nke mita 1500, ma na-ewebata ngwa ọrụ mmepụta ọhụụ. Iji mezuo mkpa asọmpi ahịa ma soro usoro akụ na ụba, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị na-emepe emepe azụmahịa azụmahịa, na-enwe ọganihu mgbe niile na ihe ọhụrụ.
Ndị na-emepụta China kacha mma - Alice Factory ọnụahịa - Alice
Ọbara a aluminium na-emepụta ihe, nkọwa gbasara baajị alumini kacha mma.Alice kacha mma China aluminom aluminom - Alice Factory Parlice - Alice, onye na-eme ihe karịrị otu ụlọ ọrụ 2% na otu ogo.Anyị (Alice) bụ ọkachamara na-emepụta ngwaahịa aha, anyị nwere ike iwepụta Zinc Alcoy, ọla, wdg.
A na-ejikarị akwụkwọ alluminium na-ejikarị ndụ na-emepụta ihe na-emepụta ndụ - China alumiko - Alice
Na-achọ baajị aluminom? Nkọwa gbasara baaji na-acha ọbara ọbaraBadge bụ akụkụ kachasị mkpa nke ngwaahịa ọ bụla maka njirimara ya n'onyinyo na ike nke onye nrụpụta.Aloy dabere na aluminom nwere ụfọdụ ihe ị na-eme ka ihe dị iche iche bụ otu n'ime ngwaọrụ Ìhè.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ alice?
Alice na-ekpuchi mita 2000 ma enwere ihe karịrị iri ise na-arụ ọrụ na ebe a ebe gụnyere Ngalaba, Mepụta, Nhazi, Ndị ọrụ ọkachamara anyị ga-emepụta ogo dị eluMetal Aha maka gị.
Ruo ugbu a, Alice ejirila paịlị 5, ma nwee ọrụ maka mkpa onwe onye mmadụ. O wulitewo nkwado nke ogologo oge na ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama, Fox PreM: Huawei, Apple Apple wdg.
Ndị otu Nduzi Ọzụzụ ọkachamara, enwere ike ịnwe ọgụgụ ọgụgụ ọgụgụ isi "
Ọ dị mkpa maka onye ọrụ ọ bụla ọ gaghị agafe mmefu ego ahụ, ọ bụ ya mere anyị ji akwụghachi ụgwọ.
A na-enyocha ọrụ niile anyị na-arụ ọrụ na nkwa dị mma iji gboo mkpa nke ọha mmadụ nke a.
Ndị otu ọkachamara anyị nwere ike iwunye ụdị akụrụngwa dị iche iche ụlọ ahụ rụchara ọrụ dị ka akụkụ nke ọrụ owuwu.
Alice ararala nye ngwaahịa ahụ kemgbe emere ya na 1998, ọkachasị elekwasị anya na arịa ụlọ na ngwa elektrọnik dị ka ọchịchọ.
Ihe ngosi Alice nwere ụdịMetal Aha Emere site na igwe anaghị agba nchara, titanium, ọla kọpa na aluminom na ndị ọzọ. Ekpuchi etching, ihe mgbochi, oxing, porishing, na-eme ka ọ bụrụ, ọnụ ọgụgụ dị mma, ọnụ ọgụgụ nke ụlọ akwụkwọ mmado na ndị ọzọ.
"A na-ewere ogo kachasị mma, arụ ọrụ kachasị mma" ka ọhụụ anyị si ọhụụ.
Na-achọ ebe mmado ọla dị na ụlọ obibi
IHE NJIKE NA-EKWU OKWU EGO NA-Eji Igwe Igwe, Titanium, Ọ ga-adị Ekpuchi etcheri, IHE MGBECHI, ​​oxing, poshish, na-esi mee, na na na} OrkAkara ngosi Akara a na-agọ bụ gabazie.
Principlekpụrụ nke igwe stampụ bụ iji ụgbọala na-efe efe site na ngwongwo, yana njigide na ngwa ọrụ iji kwaga ihe mmịfe ahụ elu, na ịnya ụgbọ ahụ na-anwụ etolite. Ihe a na-akpọ ihe a na-eme pụtara na akụkọ a nwere scid abụọ, nke na-ekewa m na mmịfe nke n'ime ya na mmịpụta mpụta. Ime ime ahụ na-agba ụta ma ọ bụ nwụọ nke ebu, mmịfe mpụta na-akpọpụ ihe mgbanaka oghere na ebu. N'otu oge ahụ, njide efu na mbụ na-ebu ụzọ na-agagharị na nsọtụ efere efere, wee mee mmịpụta nke na-akpali ịgbatị. N'ezie, ihe anyị na-akpọ igwe Punching bụ aha a na-ahụkarị, nke bụ ihe anyị na-akpọ igwe na-adọrọ adọrọ. Ekwesịrị ịkpọ aha sayensị.
Pịa hydraulic (ụdị nke hydraulic pịa) na-eji mmanụ hydraulic pụrụ iche dị ka onye na-arụ ọrụ na nsị hydraulic dị ka isi iyi. Mmanụ hypraulic na-abanye na cylinder / piston site na ike mgbapụta site na ike mgbapụta, ma ọ bụrụ na ndị cylinder / akàrà dị iche iche dị iche, mana ha niile na-arụ ọrụ nke Akara, nke mere na mmanụ hyda enweghị ike ịpụta. N'ikpeazụ, site na valvụ otu, a na-ekesa mmanụ hydraulic na mmanụ mmanụ iji mee cylinder / Piston okirikiri ịrụ ọrụ iji mezue ụfọdụ usoro arụmọrụ.
Ngwongwo nke ulo ahia nke oma
Onye na-eme ihe eji eme ihe - AliceAnyị (Alice) bụ ọkachamara na-emepụta ngwaahịa aha, anyị nwere ike iwepụta Zinc Alcoy, ọla, wdg. Ihe ịrịba ama emepụtara bụ ìhè ma dị irè, mara mma ma na-emesapụ aka, na nkọwapụta ihe atụ, na-eme ka echiche atọ dị iche iche sie ike. Ọ bụ usoro a na-ahụkarịAlice na-eme ihe eji eme ihe eji eme ihe - Alice na ọnụahịa dị mma - Alice, onye ọrụ na-erughị otu ụlọ ọrụ 2% na otu ogo.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, debanye anyị akwụkwọ!